डुबेको नेपाल बैंक २२ वर्षपछि... :: कमल नेपाल :: Setopati
डुबेको नेपाल बैंक २२ वर्षपछि नाफा बाँड्ने क्षमतामा
कमल नेपाल काठमाडौं, पुस २६
कुनै बेला टाट पल्टेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक अब भने नाफा बाँड्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ। यद्यपी बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेको छैन। बहु सेयर सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंकले २२ वर्षयता लगानीकर्तालाई कत्ति पनि नाफा दिएको छैन।
‘बैंक अहिले एक्युमुलेटेड प्रोफिटमा रहेकाले नाफा बाँड्न सक्ने क्षमतामा पुगेको हो’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले भने ‘कति नाफा दिन्छ भन्ने कुरा संचालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने हो, मैले भन्न मिल्दैन।’
बैंकसँग २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ। बैंकको वित्तीय स्थिति खराव रहेकाले २२ वर्षयता कुनै लाभांश घोषणा नभएको उनले बताए।
९ अर्ब ८१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले एफपिओ जारी गरेर सरकारी हिस्सा ५१ प्रतिशतमा झारेको छ भने ४९ प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणको छ। तसर्थ बैंकले दिने लाभांशको ५१ प्रतिशत रकम सरकारले लिनेछ।
बैंकको लाभांशप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पनि उत्सुकता छ। केही दिनयता बैंकको सेयर कारोबार उच्च हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ एफपिओबाट संकलित प्रिमियम रकमबाट सेयर बोनस समेत दिन सक्ने क्षमतामा बैंक देखिन्छ। एफपिओबाट बैंकले कुल ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो। जसबाट ३ अर्ब १८ करोड जगेडा कोषमा जाँदा बैंकको कोष मजबुत अवस्थामा पुगेको छ। बैंकको जगेडा कोष १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको छ।
टाट पल्टेपछि बैंकलाई १२ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले नै सम्हाल्यो। त्यसपछि करिब ४ वर्षयता देवेन्द्र प्रताप शाहले प्रमुख कार्यकारीको पदमा रही बैंकलाई सम्हाल्दै आएका छन्।
शाहले बैंक सम्हाल्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पर्याप्तता अनुपात समेत पुगेको थिएन। ‘मैले जिम्मा लिँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात साढे ४ प्रतिशत थियो’ उनले भने ‘११ प्रतिशतको सीमा पुर्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप केही सम्पत्ति पनि बेच्यौँ।’ सो सीमामा नपुग्दासम्म ऋण प्रवाह गर्न नपाउने, शाखा विस्तार गर्न नपाउनेजस्ता कारबाही हुन्छ।
‘त्यतिबेला चाहेर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या थियो’ उनले भने। अहिले बैंक पुँजी पर्याप्तता अनुपातका आधारमा एक नम्वर पोजिसनमा छ। यस्तो अनुपात २३. ९ प्रतिशत रहेको शाहले बताए।
कुनै बेला बैंकको निश्क्रिय कर्जा ५६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो अहिले त्यो घटेर २. ७८ प्रतिशतमा ल्याउन शाह सफल भए। ‘अन्य निजी बैंकहरुका तुलनामा यो पनि केही बढी नै हो’ शाहले भने ‘यसलाई अझ घटाउने प्रयासमा छौँ।’ नयाँ ऋणले निश्क्रिय कर्जा बढेको नभई पुरानै ऋणमा रहेको उनले बताए।
नाफाका आधारमा बैंक अहिले ‘टप फाइभ’ पोजिसनमा छ। गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बढी नाफा कमाएको बैंकको यस वर्ष ४ अर्ब पुग्ने शाहको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७१\_७२ पछि बैंक संचालन नाफामा जान थालेको हो। त्यसअघिसम्म बैंक नोक्सानमा थियो भने जगेडा कोष ऋणात्मक थियो। बैंकले पुस २२ गतेसम्म १ खर्ब ४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ।
यस अवधिसम्म बैंकको सिसिडी रेसियो ६८ प्रतिशत छ। ‘लगानीयोग्य रकमका आधारमा पनि हामी बलियो स्थितिमा छौँ, शाहले भने ‘त्यो ग्याप घट्दा आगामी दिनको नाफालाई अझ टेवा पुर्याउँछ।’
अहिले कतिपय बैंकहरु सिसिडीमा टाइट भएर बसेका छन्। सिसिडीलाई बैंकहरुले सहज अवस्थामा राख्नुपर्ने शाहको तर्क छ। ‘अधिकतम सीमा ८० हो भन्दैमा नाफाका लागि त्यति नै पुर्याएर बस्नु राम्रो होइन’ उनले भने।
विदेशी लगानी सोचेअनुरुप बढ्न नसक्नु, आयात बढ्दै जानु र पुँजीगत खर्च नबढेकाले निक्षेपको वृद्धिमा अहिले केही प्रेसर रहेको शाह बताउँछन्। ‘अर्कोतर्फ स्थिर सरकार आएपछि कर्जाको माग बढ्यो, सो मागअनुसार निक्षेप संकलन हुन सकेन’ उनले भने।
सुरुआतका समयमा बैंकमा पैसा भइकन पनि लगानी गर्न नसकिएको अवस्थाका कारण नाफा खुम्चिएको शाहको अनुभव छ। ‘सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा, त्यसमाथि लगानी नै नभएपछि बैंक नाफामा जाने कुरै भएन’ उनले सम्झिए ‘नन फण्ड बिजनेस (कमिसन आउने व्यवसाय) पनि थोरै थियो।’
आफूले बैंक सम्हाल्दा कर्मचारी खर्च ६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २ प्रतिशतमा झारेको उनले बताए। ‘आउटस्टान्डिङ डिपोजिटमा यो खर्च हेरिन्छ’ उनले भने ‘बिजनेस ह्वात्तै बढाएँ, कर्मचारी थपिएन, त्यसकारण प्रतिशतका आधारमा घटेको हो।’
बैंक नाजुक अवस्थामा रहँदा प्रमुख कार्यकारीको जिम्मा पाएका उनले यो स्थानमा ल्याउन कर्मचारीहरुको पनि साथ महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘म आउँदा कर्मचारीलाई समेत काम नपुगेको अवस्था थियो, मैले आफ्नो योजना सुनाएर त्यहीअनुरुप काममा लाग्न प्रोत्साहन गरेँ’ उनले भने। अहिले बैंकमा २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। २०७१ चैतदेखि कार्यभार सम्हालेका शाहको ४ वर्षे अवधि चैत १२ गते सकिँदैछ।
तस्वीर: नारायण महर्जन|सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २५, २०७५, ११:३५:००
एनआइसी बैंकको काउन्टरबाट इसेवामा रकम लोड गर्न पाइने
सातामा ५.२ ले घट्यो नेप्से, १९१ करोड रुपैयाँको कारोबार
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सलाई ‘इमर्जिङ एशिया इन्स्योरेन्स् अवार्ड’
यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा
ग्लोबल आइएमई बैंकको थप १७ शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालनमा
मेगा बैंकको क्यूआर कोडमा किराना व्यवसायीलाई आकर्षक अफर